Tetikasa fanavaozana ny fiasan-dranon'ny Tongren Hydropower Station
Fampiharana: Fanaraha-maso ny tondra-drano, famokarana herinaratra elektrika
Toerana: Guizhou, Sina
Simplified Elevated Dam (SED) dia tohodrano vaovao vaovao izay mampiasa paompy hydraulic manual na motera diesel hifehezana ny takelaka ambony sy ambany amin'ny fitazonana sy famoahana rano. Fanavaozana voalohany ny teknolojia paompy fanerena tànana famindra toerana lehibe ary tsy mila herinaratra. Ny SED dia mihatra manokana amin'ny faritra tsy misy herinaratra sy morontsiraka. Amin'izao fotoana izao, efa nalaza be tao Myanmar, Bangladesh, Vietnam ary firenena hafa.
Fampidirana toho-karibonetra Ny tohodran-damosina dia karazana rafitra hydraulic vaovao ampitahaina amin'ny vavahady fitehirizam-by, ary vita amin'ny lamba matanjaka be mifatotra amin'ny fingotra, izay mamorona kitapo misy vatosoa eo am-pototry ny tohodrano. Ny famenoana rano na rivotra ao anaty kitapo tohodrano dia ampiasaina amin'ny fihazonana rano ny tohodrano. Mampiala rano na rivotra avy ao anaty kitapo tohodrano, ampiasaina amin'ny famotsorana tondra-drano. Ny tohodran-damosina dia manana tombony maro raha oharina amin'ireo mpandova mahazatra, toy ny vidiny ambany, ny rafitra hydraulic tsotra, ny konstrôsiô fohy ...
Fampidirana ny zavamaniry fitsaboana rano misy fitoeran-drano
Fampidirana ny zavamaniry fitsaboana rano voapoizina Ny zava-maniry fanodinana rano voaangona dia vokatra fitoeran'ny fenitra izay novolavolain'ny Beijing IWHR Corporation (BIC). natao hitsaboana rano kely izy io. Ny Toeram-pitsaboana rano misy fitoeran-javatra dia misaraka amin'ny karazana andian-karazany roa: (1) Ny iray dia ny fitsaboana rano maloto azo ampiasaina indray: (Zavamaniry fanodinana rano maloto ao anaty rano); (2) Ny iray hafa dia ny fanadiovana rano hosotroina; (Zavamaniry fanadiovan-drano anaty rano) ...
Tanjona: hanomezana vahaolana tsara indrindra amin'ny tetik'asa fitsaboana rano.
Mba hanomezana ny fitaovana fitsaboana rano lafo indrindra.
Mba hahafahan'ny olona manana rano madio sy madio.
Sarobidy: fahamendrehana azo antoka amin'ny teknolojia miorina amin'ny olona
Toetoetra:1.Optimised dingana / vahaolana
2. Fahombiazana avo lenta miaraka amin'ny fahombiazan'ny vidiny tsara indrindra
3.Fahombiazana avo / fanjifana angovo ambany
4. azo itokisana / tsingerin'ny fiainana lava
5.Fandehanana tsotra sy tsy fikojakojana
6.Smint kely / azo itokisana
7. Fanenjehana ny "art of manufacturing"